Abadlali bamaqindi baseKhayelitsha baqhubela phambili nangona bengenazo izixhobo – Elitsha
21st June 2016 Mzi VelapiEdition 6 0 Xhosa
Asemahle Sentile ezilolonga. Onke amafoto athathwe ngu Mzi Velapi
“Sinamalungu angamashumi amathathu ananye. Abangaphantsi kweminyaka elishumi elinesibini badlalela ukuzonwabisa, ngelixa abanelishumi elinesithathu bedlalela ukungenela amakhuphiswano”, ucacise watsho loo kaMapasa noyinzalelwane yeMonti edume ngomdlalo wamanqindi.
Indawo yokuziqeqeshela bayifumana ngenxa yokuba omnye owayekhe wangumphathi weqela wayesebenzela iSixeko. Loo nto ithetha ukuthi banxusile kwaye bangakhutshwa nangaliphi na ixesha. “Ingaba bazibizela umlo ukuba bangasikhupha”, uqhule ngelitshoyo u ‘Ginger’.
IKhayelitsha Boxing Academy yathi yatshintshwa ukusukela kwiClub ukuba yiAcademy kuba babefuna ukunceda abadlali nangezinye izinto ezibalulekileyo ebomini babo.
Abadlali bamaqindi abancinci be Academy bevana amandla.
“Izinto ezinjengemfundo nokuziphatha zibalulekile kubadlali”, utshilo uAyanda.
Le Academy isebenzisana nezamanqindi zeYunivesithi yaseNtshona Koloni. Abadlali ababini abaphuma kwiAcademy baye bafumana ukuncedwa ngezemfundo yile dyunivesithi, uAsemahle Sentile ngomnye wabo bathi banethamsanqa lokufumana ukuncedwa ngemali youkufunda. “Ndenza unyaka wam wokuqala kwizifundo zeBA”, utshi lomdlali wamanqindi owaqala eseneminyaka emithandathu ukudlala amanqindi. “Ndadibana nalo mdlalo ngenxa yabakhuluwa bam ababedlala amanqindi kudidi lwabangahlawulelwayo, kodwa bewuthanda”, utshilo uSentile oneminyaka engamashumi amabini.
USentile ebeziqeqeshela umdlalo weentshatsheli ozakubanjelwa eThekwini, ngomhla we-28 Juni, eThekwini.
Umqeqeshi u Ayanda ‘Ginger’ Mapasa ebonisa umdlali omncinci indlela yokubetha ipunching bag.
Omnye umdlali ophambili waleAcademy uOnke Cephe oneminyaka engamashumi amabini ananye uthi umdlalo wamanqindi ubangcina bekhuselekile kwaye bekude kuneziyobisi. “Sihlala sixakekile ngulo mdlalo, nomqeqeshi wethu usikhathalele kwaye uyixabisile imfundo, kuba soloko esikhuthaza”, utshilo lo kaCephe.
Aba badlali babini bangqinelana ngelokuba ukushokoxeka kwezixhobo zokudlala ngoyena mceli-mngeni abajongene nawo kule Academy.
“Abo bangakwaziyo ukuqhubekela phambili kwezemfundo ngelixa bedlala sibakhuthaza ukuba badlalele ukungenela udidi lwabahlawulwayo”, uqwele ngelitshoyo umqeqeshi u ‘Ginger’.